Duties and Responsibilities of the Policy Department
1. Reviewing on orders and directives Myanmar Hotel and Tourism Law.
2. Submitting to supplement the facts of Myanmar Hotel and Tourism Law with necessity.
3. Reviewing, observing and performing on orders and directives.
4. Acting the legal advice of the Union Attorney General office to promulgate the required laws, rules and regulations and procedures which it is to become the accomplishment of tourism industry in the nation.
5. Answering the related questions and proposal, who asked from the parliamentarians.
6. Submitting the proposal letter to the Union Government’s Meeting and the respective committee of the Union Government.
7. Promulgating the necessary policies, order, directives and notifications to perform the current tourism industry in accordance with the modernize system.
8. Amending and reviewing the requirement of order concern with business license.
9. According to the current situation and tourism industry, Myanmar Hotel and Tourism Lawis necessary to enact new Myanmar Tourism Business Law (Draft) that shall be in line with other international tourism laws.
10. The Ministry of Hotels and Tourism prescribed the following notifications such as “the beaches as the tourist destinations with notification No. (1 /2015)”and “sustainable for coastal beach areas with notification No.(2/2015)”according to the Myanmar Hotel and Tourism Law section 31,sub-section(b)on 1st January ,2015.
၁။ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလာရေးဥပဒေဆိုင်ရာအမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအားမပြတ်လေ့လာသုံးသပ် ခြင်း
၂။ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလာရေးဥပဒေပါအချက်များ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါကပြုစုတင်ပြ ခြင်း။
၃။ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များအပေါ် သုံးသပ်လေ့လာဆောင်ရွက်ခြင်း။
၄။ နိုင်ငံတော်တွင် ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်စေရေး၊ လိုအပ်မည့် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထုတ်ပြန်ရေးရှေ့နေရုံးချုပ်၏ အကြံပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
၅။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ မေးမြန်းလာသည့် မေးခွန်းများ ဖြေကြားခြင်းနှင့် ကတိက၀တ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
၆။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကော်မတီအသီးသီးသို့ အမှာစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း။
၇။ လက်ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော မူဝါဒများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ နှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများကို ထုတ်ပြန်ခြင်း။
၈။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ၏ လိုင်စင်ဆိုင်ရာအမိန့်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၉။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ မျက်မှောက်ကမ္ဘာနှင့် မြန်မာ့ခရီးသွား လုပ်ငန်းအခြေအနေအရ အခြားနိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်း ဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။
၁၀။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၁ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ “ကမ်းခြေများကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်များ လည်ပတ်နိုင်သောခရီးစဉ် ဒေသများအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၁ / ၂၀၁၅” နှင့် “ကမ်းခြေဒေသ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၂ / ၂၀၁၅” ကို (၁.၁.၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။